Rambeloson Christian Erick Manome 12 ora ho an`ny fitondrana…
Pety Rakotoniaina Ho fantatra rahampitso izay hiafarany
Raha tsy misy ny fiovana dia hiakatra tribonaly rahampitso 26 martsa 2016 i Pety Rakotoniaina, raha ny loharanom-baovao iray.
Fampielezan-kevitra any Tsaratanàna Mampitaintaina tanteraka
Taorian` ny vono nihatra tamin` ilay kandidà tohan` ny vondrona IRD miaraka ny Filoha Andry Rajoelina tany amin`ny distrika Tsaratanàna izay namoy ny ainy ny alakamisy lasa teo dia manahy ireo kandidà solombavambahoaka hilatsaka amin` ny fomba atrehina ny fampielezan-kevitra.
Fifidianana solombavambahoaka Fitoriana 19 nolavin` ny HCC
Fitoriana miisa roa amin` ireo 21, izay voarain` ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) no mbola tsy namoahany fanapahan-kevitra.
Fikambanana Farimbona Ambohimanarina Tsy miala amin-dRamose Todisoa izahay
Ianao ihany no fantatray, tsy mandray baiko avy amin’izay any ambadika any izahay aloha fa ity no anay, ary Ramose Todisoa no efa namaha ny olanay.
Marc Ravalomanana “Manan-danja ny depiote”
Efa niaraha-nahalala tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny filaharan’ireo kandida amin’ny fifidianana filoham-pirenena.
Firenena malagasy Mizotra mankany amina krizy indray
Raha ny tondro eo amin’ny sehatra iraisampirenena ankehitriny dia mizotra ho any amin’ny fahantrana lalina i Madagasikara izay maro amin’ny mponina ao aminy no miaina fidiram-bola latsaky ny 1,90 dolara isan’andro.
Andry Rajoelina Filohan’ampahana Malagasy ihany ve ?
Miala any ny don-tandroka samihafa hoenti-mampandany ny olon-dRajoelina hahazoana ny maro an’isa tsy azo hozongozonina eny amin’ny antenimieram-pirenena.
Nivoaka tamin`ny fahanginany ny vondron`olona sy fikambanana manoloana ny zava-misy eto amin`ny firenena nilaza ny tandindon-doza ho an`ny firenena.
58 taona izao ny nahazoan`i Madagasikara ny fahaleovantena kanefa tsy mbola nisy politika fampandrosoana mitohy sy maharitra hatramin`izao. Nampiaka-peo Rambeloson Christian Erick manoloana ny olana sedrain`ny firenena. Ampy izay, feno ny kapoaka, hoy izy. Notsikerainy avokoa ny fizotra sy ny fikarakarana ny fifidianana, ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly sy ny fanaraham-pahefana, ny fanitsahana ny lalàmpanorenana… Nilaza Atoa Ranbeloson Christian Erick fa aleo mba atao ara-dalàna ny fifidianana. Mangataka ny fametraham-pialan`ny filohan`ny HCC, Jean Eric Rakotoarisoa izy.”Mpahay lalàna ianao fa tsy mpanitsaka lalàna”, hoy hatrany ny fanazavana. Ny CENI ihany koa dia tokony hanokatra tsy misy hatak`andro ny lisi-pifidianana. Manome 12 ora an`ny fitondrana sy ireo tompon’andraikitra izy mba handray ny andraikiny manoloana ireo zava-misy eto amin`ny firenena. Miantso ny vahoaka handinika lalina ny zava-misy ary tsy hanaiky hatao fitaovana intsony sy vidiana amin`ny vola sy akanjo. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra, tsy tompon`andraikitra amin`izay zavatra hiseho ireo vondron’olona sy fikambanana ireo. Ireo teboka ireo no navoitran`izy ireo nandritra ny valandresaka tamin`ny mpanao gazety omaly tetsy Antaninarenina